Ahoana ny fametrahana sary (ISO, MDF, sns.) | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana sary (ISO, MDF, sns.)
Efa nila nametaka sary ISO, IMG, BIN, NRG na MDF ve ianao, ankoatry ny hafa? Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fitaovana maro aho hahafahana manao zavatra mitovy amin'ny nataonao tamin'ny Win with Alcohol 120%, PowerISO, sns. Hanomboka amin'ny fijerena ny fomba fametrahana ISO izahay - ny endrika mahazatra indrindra- avy ao amin'ny terminal ary avy eo hodinihinay ny toetr'ireo fitaovana hita maso samihafa ho an'ny Linux.
1 Ahoana ny fametrahana sary ISO avy amin'ny terminal
Ahoana ny fametrahana sary ISO avy amin'ny terminal
Podemos mametraka sary kapila ISO (.iso) nefa tsy mila mitahiry azy, manaraka ireto dingana ireto:
Mamorona lahatahiry (mount point) hametrahana ny sary izahay:
Ampidirintsika ao anaty kernel ny maodelin'ny loop raha tsy mbola navoaka izy io:
Ampidiro ny lahatahiry misy ny sary (ao amin'ny toerantsika / trano / mpampiasa):
cd / trano / mpampiasa
Izahay dia mametraka ny sary:
sudo mount -t iso9660 -o loop file.iso / media / iso
Midika izany fa ny atin'ny ".iso fisie" dia hapetraka ao anatin'ny lahatahiry /media/iso.
Hampidina ny sary:
Gmount ISO dia rindrambaiko manampy antsika hametraka mora foana ny sary ISO, toy ny hoe teo amina CD / DVD tao amin'ny masininay izy ireo. Araka ny hitanao amin'ny pikantsary dia fitaovana tsotra sy mora ampiasaina izy io, ka kely ny azo ambara.
gISOMount dia safidy hafa amin'ny fampiasana ny console hampidirana sary ISO CD / DVD. Io koa dia mamela:
Kajy ny MD5 an'ny sary
Mpamosavy Burn Image
Mizaha atiny sary
Furius ISO Mount dia mamela antsika hametaka sy hampidina ny sary ISO, IMG, BIN, MDF ary NRG amin'ny fomba intuitive sy tsotra hahafahana mampiasa azy ireo nefa tsy mandoro CD / DVD.
Mazava be izy io, zara raha mandany loharano.
Miakatra ho azy ny rakitra ISO, IMG, BIN, MDF ary NRG.
Mamorona teboka mandeha ho azy ao amin'ny fampirimana / trano.
Fanesorana sary ireo sary mandeha ho azy.
Unmounting dia manala ny sisin-tany avela / trano ao amin'ny fanjakana teo aloha ihany koa.
Mitahiry tantara miaraka amin'ireo sary 10 farany napetraka.
Azo atao ny mametraka sary marobe.
Dory ny sary ISO sy IMG ao anaty kapila optika.
Mamorona ny baiko ilaina raha te-hametaka na hanondrotra tanana amin'ny tanana ianao.
Miteraka fitsangatsanganana MD5 sy SHA1;
AcetoneISO Izy io dia "manipulator sary CD sy DVD ho an'ny Linux", saingy afaka mahavita zavatra betsaka kokoa izy io:
Fafao ny CD / DVD azo soloina.
Mivoria ary esory ny ISO sy MDF.
Alefaso mivantana amin'ny K3B ny sary ISO, CUE, TOC.
Fahaizana mamorona ISO avy amin'ny folder sy CD / DVD.
Avadiho ny BIN / CUE, MDF, NRG, CCD / IMG, CDI, XBOX, B5I / BWI, PDI ho ISO.
Zahao md5sum avy amin'ny rakitra sary ary mamorona rakitra md5sum avy amin'ny ISO.
Zarao ISOs ho fisie kely kokoa mamela ny mpampiasa hisafidy ny refy mifanaraka aminy indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fametrahana sary (ISO, MDF, sns.)
Misaotra betsaka, hanandrana ny haingana sy mahaliana aho 🙂
Wortega dia hoy izy:
Misaotra amin'ny Post. Milaza aminao aho fa manandrana mamoaka dvd amin'ny SuSE 10.2 ka iso 9660. Noho ny fahasarotan'ny fanovana ireo loharanom-pametrahana ny rafitra. Izay no maha nova hahaha.
Fiarahabana avy any Nicaragua, tanin'ny farihy sy volkano. jereo intur.gob.ni
Valiny tamin'i Wortega
ziriako ziriako dia hoy izy:
Rahalahy tena tsara
manaitra ahy izany hoe olona nandalina siansa politika
mampiasa GNU / Linux
Eto Mexico ihany no maniry hampiasa azy io dia ireo injenieran'ny rafitra
ary ny tarika amporisihiko azy ireo.
Tsara ny filozofia azoko
ary mitovy amin'ilay ampiasako ny GNU / Linux
Misaotra fa nandinika zavatra maromaro tao amin'ity bilaogy ity aho
vintana amin'ny zavatra rehetra
Karakarao tsara ny tenanao.
Valio ziriako ziriako
Misaotra anao!! Mandefasoka be aminao aho !!
Faly aho fa manampy izany!
Fer lee dia hoy izy:
Mazava sy fohy. Namonjy fotoana be dia be tamiko ianao tamin'ity lahatsoratra ity. Ankasitrahako izany 😉
Valiny tamin'i Fer Lee
Mampiasa fizarana Linux Mint Mate miorina amin'ny Debian aho, ary nanana olana tamin'ny fampiasana ny AcetoneISO satria tsy naniry ny hametaka rakitra ISO aho, rehefa avy nitady fampahalalana sy nanome ny mpampiasa ahy hiditra ao amin'ny vondrona FUSE (ho fanampiana hoy), tsy nahazo valiny aho. Ka nanapa-kevitra ny hametraka aho
Furius ISO Mount ary izaho koa tsy nahazo valiny, raha tsy amin'ny safidy voalohany (tsy dia be io) eo anelanelan'ny FUSE na LOOP, amin'ny alàlan'ny default Fusion dia toa voafidy ary novaiko ho LOOP, nanomboka teo dia niasa tsara. Manantena aho fa hisy hahasoa azy io.
Misaotra betsaka anao noho ny fampahalalana tena manabe ny bilaogy, nataoko ihany koa ny fivorian'ny console (terminal) ary nety tsara izany!
Marina izany, ny lakileny dia ny misafidy loop.
Raha ny marina, raha hametraka iso amin'ny terminal ianao dia mila manoratra:
sudo mount -o loop loop / file.iso / path / aiza / mount
Hey taloha ao amin'ny fampirimana misy, ao amin'ny dingan'ny cd trano / mpampiasa /.
Manana ny sary eo amin'ny birao wifislax aho; afaka mampiasa baiko mitovy amin'izany ve aho?
Maody sary ary mora mora!
Kevin mike dia hoy izy:
Valiny amin'i Kevin Mike
Misaotra noho ny fampahalalana nahafahako nisintona ny Gmount tsy nisy olana, ny safidy voalohany hipetrahana avy any amin'ny terminal, tsy nety tamiko izany, saingy fantatro fa ilay lahatsoratra ihany dia nilaza fa tsy nohavaozina izy io.
phopsys dia hoy izy:
Salama, andao hampiasa Linux, lahatsoratra mahafinaritra, ilaina ihany koa na eo aza ny fotoana nanoratana azy, famantarana iray hafa amin'ny hatsaran'ny atiny ...
Lazaiko aminao, amin'ny Ubuntu 14.04 fotsiny dia mila mametraka azy aho ary farafaharatsiny mahita ny atin'ny DVD ary nanandrana ny telo amin'ireo rindranasa voalaza tao amin'ny lahatsoratranao aho ... napetrako izy ireo ary wuaaaaalaaaa nametraka sy nijery ny atiny aho ny kapila DVD natsofoka tsy nisy olana ... dia misaotra anao teo ary nanao atiny kaliberaly toy izany ...
Fiarahabana avy amin'ireo nosy tsara vintana
Valiny amin'ny phopsys
Misaotra phopsys! Mandefasako tanana ianao! Paul.
Misy mahalala ve raha azo apetraka amin'ny sary iso ny lalao windows amin'ny linux?
Ie azo antoka. Ho an'izay dia tsy maintsy apetakao ao anaty fampirimana ny fisie ISO ary avy eo miditra amin'ilay folder fotsiny.
Mamela lahatsoratra vitsivitsy afaka manampy anao aho: https://blog.desdelinux.net/?s=montar+iso
mety misy olona afaka manampy ahy hanao sary ny kapilaiko amin'ny partition hafa
raha sanatria ka voa ilay rafitra na mihasimba dia mihazakazaka na mametraka ilay sary
Efa nataoko fa te hanova ny rafitra avy amin'ny xp mankany win10 aho, tsy tadidiko fotsiny ny baiko
mahita ny fizarazaran-toerana izay hamonjy ny recoveri
na zavatra toa izany, tsy tadidiko intsony
Tsaroako fotsiny fa saika mitovy ny kaody fanaovana ny sary amin'ny fakana tahaka azy
Jonathan Mejia dia hoy izy:
Ry namana mpiara-miasa atoandro
Faly miarahaba anao, Jonathan Mejia avy any Honduras aho
Lazaiko aminao fa manana olana an'arivony aho, izay tsy voavahako, satria efa nampiasa linux mint aho tsy mbola nitaraina mandra-pahatongan'ny ankehitriny, dia avelao aho hiteny aminao hividy solosaina vaovao, hametraka linux mint 18 ary ny masinina tsy mamaly fampiharana marobe ary amin'ny ankapobeny dia miadana.
Te hahafantatra aho raha afaka manolotra zavatra mety hiasa tsara ho ahy ianao, ny masiniko dia ACER maniry 270, mety ho linux mint na ubuntu ihany io.
Tsy te-hanala ny fampiatoana ny linux aho
ary omeo dingana vitsivitsy aho dia izay
ao anaty linux mint
Mamaly an'i jonathan mejia
Alvaro posu dia hoy izy:
Tsara. Manana olana aho manandrana mametraka ny sary iso, manome ahy izao lesoka manaraka izao:
mount: karazana fs diso, safidy ratsy, superblock ratsy amin'ny / dev / loop5,
tsy misy programa codepage na mpanampy na lesoka hafa
Avy eo aho manandrana manao azy amin'ny Gmount-iso ary manome ahy hadisoana aho milaza fa nisy ny lesoka fa tsy hita.
Valiny tamin'i Alvaro Posu
Midira amin'ny amboara Tompon'ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra
Fanitarana mahatalanjona hamaky bebe kokoa ny lahatsoratrao amin'ny Internet